Sawirro: Kooxdii Sheekh Shariif oo Xisbi kaga dhawaaqay Muqdisho - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Muqdisho ayaa maanta looga dhawaaqay Xisbi Siyaasadeed ay ku mideysan yihiin Siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay Dowladdii KMG ee Madaxweyne Sheekh Shariif Sh. Axmed, waxaana Xisbigaasi la yiraahdaa Daljir.
Ku dhawaaqista xisbiga Daljir ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan baarlamanka oo uu ka dhex muuqday xildhibaan C/qaadir Cali Cumar, siyaasiyiin aad ugu dhow Sheekh Shariif iyo qeybaha bulshada sida, haween, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha xisbiga cusub ee Daljir xildhibaan Xasan Macalin Maxamed oo Dowladdii Sheekh Shariif kasoo noqday Wasiiru dowlihii Madaxtooyada oo munaasabadaas ka hadlay ayaa faahfaahin dheer ka bixiyey sababaha loo aasaasay xisbigan iyo himilooyinka uu hiigsanayo xisbigan.
“Xisbiga halka uu tiigsanayo gaaristeeda una ah yoolka waa gaarsiinta muwaadinka Soomaaliyeed heer uu dareemo degenaansho buuxda oo dhan kasta ah sida amaanka, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo horumarkan iyo dhinaca kale ilaalinta caqiidada, ilaalinta, sharafta, nafta, hantida, Xoriyada aasaasiga iyo tan umadeed” ayuu yiri gudoomiyaha
Cadde Gaabow guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo isna ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadashay xafladan ayaa ugu baaqay Xisbiga inuu noqdo mid metalaya Soomaalida kana fogaado qabyaalada iyo kooxeysiga.
Xisbigan cusub ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu yahay mid u gogol xaaraya mustaqbalka siyaasadda Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo xiligan ku mashquul waxbarasho Jaamacadeed.